Ifilimu yokuKhusela, iFilimu eKhuselayo yeKhaphethi, iFilimu yokuKhusela uPe-Haoen
Ukukhuselwa kweBhodi yokuhombisa
Ukukhuselwa kwe-ACP (ipaneli edibeneyo yealuminium)
Ukukhuselwa kweProfayili yeAluminiyam
Ukukhuselwa kweAluminiyam Sheet
Ukukhuselwa kombala weNsimbi
Ukukhuselwa kwentsimbi engenasici
Ifilimu yokukhusela i-PET
Ifilimu yokukhusela i-PVC
Ifilimu yokhuselo ye-PP
Ifilimu yeZithintelo zamazinyo
Umkhuseli womgangatho onzima
Isembozo esitsha sokufihla izinto
Anti-UV Protection Film for Window Glass kunye FR ...
Ukuguqula umva ngefilimu yokuKhusela umphezulu waManxeba ...
Ifilimu yeAluminiyam yoKhuseleko
I-ACP (iphaneli edityanisiweyo yealuminium) ifilimu yokukhusela
Ifilimu yokuKhusela umphezulu eNzima
I-HAOEN FILM YOKHUSELEKO inikezela uluhlu olwahlukileyo nolwahlukileyo ngaphezulu kwama-500 eefilimu ezikhuselweyo.
Ifilimu yethu yokukhusela inokusetyenziswa ngokubanzi ukukhusela insimbi engenasici, i-aluminium, isinyithi esenziwe kwangaphambili, iphepha leplastiki kunye neprofayili, i-ceramic, ikhaphethi, ii-laminates zokuhombisa kunye neglasi njl.
Izinto zethu zobunjineli zivumela izisombululo ezizenzekelayo kumgangatho ngamnye
Iingxaki zomgangatho wezinto zePET
Ipateni yomnyama yingxaki edla ngokuqubisana nezinto zefilimu ezikhuselayo zePET, kuba umphezulu wezinto ezikhuselayo zefilimu uqinisiwe, kwaye ukuqina kuxhomekeke kunyango olushushu kakhulu, ke kuya kwenziwa umgca onemibala kumphezulu wento leyo. yikristale p ...
Imibuzo eli-10 oza kuyibuza ngaphambi kokukhetha u-R ...
Ukuqinisekisa ukuba ufumana ifilimu efanelekileyo yokukhusela izicelo zakho qiniseka kwaye ubuze le mibuzo. Ngaba ifilimu iya kusetyenziswa kwindawo erhabaxa okanye egudileyo? Imiphezulu yeerougher inendawo engaphezulu kwaye ifuna ukubambelela ngokuqinileyo. Ngaba umphezulu ucocekile kwaye womile? Iimeko zesicelo esimdaka ziya ...
Ithiyori yokuhombisa ifilimu yokukhusela
Inombolo ye-8 yeLishe Road, isitalato i-Yuqi, iSithili saseHuishan, iWuxi, Jiangsu, China.